SOMALI THINK TANK » Afar Dhagax Dhexdood!
You are here: Home / Culture, Featured Articles, Politics / Afar Dhagax Dhexdood!
Afar Dhagax Dhexdood!
Posted by STT on Jul 16, 2015 | Leave a Comment
Waqtigii loogu tala galey in doodaha ay billowdaan waa la dhaafay. Dad ka badan tiradii la filayay ayaa goobta yimid. Waxaa golaha loo fadhiyaa in la dhageysto dood lagu soo bandhigayo aragtiyaha waayahan danbe laga daba dhacay ee looga waramo sooyaalka iyo siyaasadda casriga ah ee Soomaalida. Rag afmaal ah oo laga soo kala xuley kooxaha kala duwan ee isku haysta fasiraadaha laga bixiyo taxanaha taariikhda iyo siyaasadda Soomaalida ayaa madashada lagu martiqaadey si loo dhagaysto waxyaabaha ay bulshada ku biirin karaan. Nin walba waxaa loo qabtay Saddex daqiiqo iyo Saddex ilbiriqsi si waqtiga loo ilaaliyo. Ciinwaanka doodu waa: danta dadka Soomaaliyeed.
Madasha fagaarahan ka dhacayo waa goob ka yara durugsan tuulada mustaqbalka noqon doonta caasimadda Soomaaliya. Kuraas salka la saaro madasha kama muuqdaan. Inta badan dadka goobta yimid, waxay si qalbi furnaan ah dabada ugu hayaan dhulka. Waxaa dhanka bari ee madashada ka soo jeeda odayaashii tuulada. Meel aan ka fogeen halka odayaasha ay fadhiyaan, waxaa ka muuqda Xaddiyo oo waayahan danbe u xuubsiibatay Islaan xusul baruur ah ka dib marki xikmad badan iyo xeeldheeri durugsan ay ka dhaxashay madax falluuqa Soomaalida. Qadarin iyo maamuus Islaanta loo muujiniyo darteed, waxaa lagu sharfay in fadhi ay ka dhigato gasacad maran oo waa dhexdaas ah caano boore laga cabay.
Xaddiyo madasha qaab cago jiid ah ayay ku timid ka dib markii duq Xandulle oo maalmo ka hor qaab qudbo siro ah isku guursadeen uu ku qalqaaliyay ka soo qayb galka madasha dooda maanta lagu qabanayo. Oday Xandulle ujeedo kale oo sir ah ayuu ka lahaa martiqaadka marwadiisa cusub ee duq Xaddiyo.
Habeen dhexdaas ah mar uu Xandulle la haasawayay duq Xaddiyo ayuu wuxuu maqlay ayadoo leh“ kama helo ragga af-garroocyada ah ee hadalka ku mergada ee aan heli karin hadalka miiddiisa. Hadalkaas hoos ka tuurka ah wuxuu oday Xandulle ka qaadday buufis! Haddaba, wuxuu rabay inuu tuso islaanta isbaarada u dhigatay qalbigiisa,heerka uu ka gaaray codkarnimada waayo Xandulle waxaa maanta loo xilsaaray inuu noqodo xiriiriyaha u dhaxeeya marti sharafta iyo ragga qudbooyinka iyo doodaha ka soo jeedin doona shirka.
“Aan is dhageysano walaalayaal, doodihii baa inoo bilaabanaya, haddana waxaan u yeeraynaa ninkaas odayga ah ee dhexda fadhiya.” Sidaa waxaa yiri Xandulle oo codkiisa xabeeb iyo is xariifin laga dareemayo.
Odaygii dhexda fadhiyay ayaa soo dhaqaaqay. Muuqaal ahaan waa nin gaaban oo ladnaan gadaal ka gaar ah ay ka muuqato, garka waxaa u marsan cillaan cusub oo laga keenay dalka Cumaan. Wuxuu ku labisan yahay futashaari afar jeeble ah iyo koofiyad barawaani ah. Midabkiisu waa madow la moodo muufo si xun loo dubay oo kale! Qudbaddii uu shirka ugu talo galay wuxuu ku bilaabay hadal sidan ahaa: Si aad u aqrisid sheekada oo dhan Halkan Riix